Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: ဦးဝီရသူ ပခုက္ကူတရားပွဲအောင်မြင်
မန္တလေးမြို့၊ မစိုးရိမ်တိုက်သစ်၊ ဓမ္မသဟာယကျောင်းနာယက၊ ဘဒ္ဒန္တဝိစိတ္တာဘိဝံသ-အရှင်ဝီရသူ (မစိုးရိမ်) သည် ရခိုင်ပြည်သူများအတွက် အလူခံဋ္ဌာနများဖွင့်၍ အလှူခံခြင်း၊ တရားပွဲများကျင်းပ၍ အလှူခံခြင်းများ ပြုလုပ်လျှက်ရှိရာ၊ ယနေ့ ၂၂၊ ၆၊ ၂၀၁၂ရက်နေ့တွင် ပခုက္ကူမြို့ ရခိုင်ပြည်သူကူညီရေး အထူးတရားပွဲ၌ နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတော်များ ဟောကြားခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
အဆိုပါ တရားပွဲကို ပခုက္ကူမြို့ ဗောဓိမဏ္ဍိုင်ကျောင်း၊ အရှေ့တိုက်၊ အလယ်တိုက်၊ အနောက်တိုက်တို့မှ ဆရာတော်ကြီးများဦးဆောင်၍ ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ရခိုင်ပြည်သူနှင့် ကချင်ပြည်သူများအတွက် (၅) ရက်တိုင်တိုင် အလှူခံဌာနဖွင့်ကာ အလှူခံပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ပခုက္ကူ မြို့တွင် ရပ်ကွက်ပေါင်း (၁၅) ရပ်ကွက်မှ လှူဒါန်းကြသော အလှူခံငွေများကို ရခိုင်ပြည်သူနှင့် ကချင်ပြည်သူများအား ခွဲဝေလှူဒါန်းဖို့အတွက် ဆရာတော်သံဃာတော်များ၊ ပရဟိတအသင်းများ၊ မြို့သူမြို့သားများက အားတက်သရောဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းလည်း သိရပါတယ်။
တရားပွဲကို မြို့လယ်ဓမ္မာရုံ၌ကျင်းပရာ ပရိသတ်များအထူးစည်ကားကြောင်း၊ ပရိသတ်များ တဖွဲဖွဲ တသဲသဲ လာရောက်နာယူကြလို့ မူလ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ည (၈း၀၀) နာရီမှာ မဟောကြားနိုင်သေးဘဲ (၈း၃၀) မှ ဟောကြားနိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ ပရိသတ်များမှ အလှူငွေ ဓမ္မပူဇာငွေများ အားလုံးပေါင်းလျှင် ငွေကျပ်သိန်းနှစ်ဆယ်နှင့် တသောင်းတထောင့်နှစ်ရာ့ငါးဆယ် (၂၀, ၀၁၁, ၂၅၀) ရရှိခဲ့ကြောင်း၊ အဆိုပါ အလှူငွေများ တွင် ဗောဓိမဏ္ဍိုင်စာသင်တိုက်မှ စာသင်သားကိုရင် ဦးဇင်းလေးများလှူသော အလှူငွေကျပ်သုံးသိန်းကျော်ပါဝင်ကြောင်း သိရပါတယ်။
အရှင်ဝီရသူဟောကြားသော တရားအမည်မှာ “အမျိုးသားရေး သွေးမအေးစေနဲ့” ဖြစ်ပြီး၊ အောက်ပါဆောင်ပုဒ်လေးနဲ့ အဆုံးသတ်သွား ခဲ့ပါတယ်။
“ဗုဒ္ဓဘုရား ချမှတ်ထား မှတ်သားကြစေရာ။
အမျိုးသားရေး သွေးမအေး မနှေးဆောင်ရွက်ပါ။”
၂၃-၆-၂၀၁၂-ရက်နေ့မှစ၍ (၅) ရက်တိုင်တိုင် အလှူခံမည့်အစီအစဉ် ဖျက်သိမ်းလိုက်ရခြင်းအကြောင်းကို တရားပွဲအပြီးတွင် အရှေ့တိုက်၊ စံပြ (၁) ကျောင်း ဆရာတော်ဦးဇဋိလက တရားနာပရိသတ်များအား မိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။
ထိုသို့မိန့်ကြားရာမှာ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရထံ ကောက်ခံရရှိသော ငွေနှင့်ပစ္စည်းဝတ္ထုစာရင်းကို တင်ပြရမည်။ အလှူငွေနှင့် ပစ္စည်း ဝတ္ထုများကို အပ်နှံရမည်။ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအမည်ဖြင့်သာ လှူဒါန်းရမည်ဟု ညွှန်ကြားချက်ထွက်လာသောကြောင့် မူလအစီအစဉ်ကို ဖျက်သိမ်းလိုက်ရကြောင်းသိရပါတယ်။
“ရှားရှားပါးပါး ဖြစ်ရပ်ပါပဲ။ ဦးဇင်းတရားပွဲဆိုရင် ပွဲမိန့်ကျဖို့ပဲ ခက်ခဲတာပါ။ ဝါခင်းကုန်းဆရာတော်ကြီးလည်း သတင်းစာကနေကြေညာပြီး အလှူခံနေတာပါပဲ။ NGO အဖွဲ့တွေလည်း ရခိုင်အထိ သွားလှူနေကြတာပါပဲ။ ပခုက္ကူကြမှပဲ သူတို့ထံအပ်နှံရမယ်ဆိုတာ ကြားဖူးတာ” အ ရှင်ဝီရသူ မိန့်ကြားပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီး အရှင်ဝီရသူက အလှူခံကိစ္စနှင့်ပက်သက်ပြီး မိန့်ကြားလာတာက … “ကျောက်ဆည်မှာလည်း တခါကြုံရတယ်။ အလှူခံချင်ရင် အဆင့်စာတင်ပါဆိုပြီး ခေါ်ပြောတာ။ ဒုက္ခသည်တွေကိုကူညီဖို့အတွက် ခင်များတို့ထံ အမိန့်ခံရဦးမှာလား။ ကျုပ်တို့ကတော့ အဖမ်းခံနိုင်တယ်။ ခင်များတို့ သိက္ခာကျချင်ရင် ဖမ်းပေါ့လို့ ပြောလိုက်ရတယ်”ဆိုတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီတော့ ဖမ်းရောလားဟု မေးတဲ့အခါမှာတော့ … “ဖမ်းတော့ မဖမ်းဘူးဗျ။ ဒါပေမဲ့ အလှူခံစာရွက်တွေဝေရင် မယူကြနဲ့တို့၊ ကိုယ်တိုင်လာ အလှူခံရင် မလှူကြနဲ့တို့လုပ်ပြီး လိုက်ပိတ်ပင်ကြတာ။ စာရင်းအင်းတွေကို ခဏခဏလာမေးတာမျိုးတော့ လုပ်ကြတာတွေ့ရတယ်” ဟု အ ရှင်ဝီရသူက မိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။
ကျောက်ဆည်အလှူခံဌာန တစ်ခုတည်းမှာပင် ငွေကျပ်ဆယ်သိန်းခန့်နှင့် အဝတ်အထည် ကားတစ်စီးစာရကြောင်း၊ အလှူခံဌာနအားလုံးပေါင်းလိုက်လျှင် ငွေကျပ်သိန်းတစ်ရာကျော်ရပြီဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရပါတယ်။
Posted by ကျောက်ဖြူသားချေ at 07:52
Copyright © 2011. Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: ဦးဝီရသူ ပခုက္ကူတရားပွဲအောင်မြင် . All Rights Reserved